Miyuu xayawaanku ku habboon yahay sida xayawaanka raba? Talooyin ku saabsan daryeelka xayawaanka
Noocyada - habdhaqanka habboon ee xakamaynta xayawaanka dhabta ah
Cuntada loogu talagalay kabaha
Buundooyinka waa xayawaan nool
Digniinta gacan-qabsiga gacanta
Buundada ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu quruxda badan shimbiraha adduunka. Ilaa ilaa noocyada 350 waa la kala saari karaa, oo ay ku jiraan subaxda 850. Shimbiraha kala duwan ee shimbiraha hadda waa lagu maamuusi karaa aduunka oo idil, sidaa darteed waxay noqonayaan kuwo caan ah waxaana badanaa loo tixgeliyaa sida xayawaanka ah ee quruxdooda.
Guryaha - Daryeelka - Shaqada - Cuntada xayawaanka
Shimbiraha waxay ku dhalaan Australia, America ama New Guinea, laakiin waa la ilaalin karaa adduunka oo dhan, waxayna u koraan 100 sano. Laakiin mawqifka xayawaanka dhabta ah miyuu ku beddelayaa eeyaha, bisadaha ama guurka beeraha guinea?
Miyuu xayawaanku ku habboon yahay sida xayawaanka raba?
Wixii shimbiraha oo dhan, haynta qafis ma noqon karto dhab ahaan caado ku haboon. Si kastaba ha ahaatee, tan lama huraan u ah mulkiilayaasha badankooda. Sidaa daraadeed, waa muhiim in la fiiriyo qulqul weyn oo ku filan, baqashada ka yaryar mitirka 4 iyo 2 ballaaran, iyo sidoo kale sare, waxay noqon kartaa mid naxariis darri ah oo laga yaabo inay u adeegto meel lagu seexdo.
Xaqiiqdii, dabeecad caqli-gal ah wuxuu xaqiiqo u noqon karaa noocyada marka ay shimbiruhu leeyihiin meel ballaadhan oo banaanka ah, oo ay ku jiraan hoy aad u kulul.
Si ka duwan eeyaha ama bisadaha, shimbirahan waa inay sidoo kale ka taxaddaraan qoyaanka saxda ah ee qolka. Xataa jiilaalka, tani waa inay ahaataa ugu yaraan 60 boqolkiiba.
Yaa leh dhir badan oo qolka ka mid ah ayaa sidaas ku kordhin kara qoyaanka kor u kaca. Intaa waxaa dheer, xakamaynta ayaa la buufin karaa dhowr jeer maalintii oo biyo yar leh. Haddii qoyaanka uu aad u hooseeyo, xuubka ayaa laga qaadi karaa cudurka sambabada oo ugu dambeyntii u dhinta.
Dhinaca gudaha aviaries aad bay muhiim u yihiin. Bacaha, ama qoryaha qoryaha qoryaha waa in lagu badalaa laamaha dabiiciga ah, sida geedo miraha ah, berrimooyin ama geedo lime ah. Xayawaanku way yaraayeen, uluhuna maaha xitaa. Sidaa darteed, caabuqa cagaha ayaa laga hortagi karaa.
Sidoo kale, ciidda dabaqyada aviary waa inaan loo noqon boodh, halkii, waa sabab u ah wargeys, kaas oo la beddelo maalin kasta. Xitaa qashin-qubka ayaa ku habboon daboolka.
Si looga fogaado sunta culus ee ku jirta xakamaynta, taas oo keeni karta shibbada joogtada ah ee wax walba, aviaries waa inaysan laheyn budada budada ama rinjiga. Aviaries ka samaysan bir birta ah oo aan qallajin ayaa u fiican.
Cuntada baayacmushtariga ah ee la iibsado ee loogu talagalay cayayaanka ayaa ku haboon nafaqada. Si kastaba ha ahaatee, dareenka waa in lagu bixiyaa halkan quudinta dheeriga ah. Miraha iyo khudradda waa la siin karaa maalin kasta si loogu gooyo. Ku dhowaad dhammaan noocyada waa ku habboon yihiin oo caan ah.
Sida dabiiciga ah, xayawaanku ma ahan kuwa cagaarka ah ee macaan, laakiin waxay u baahan yihiin in si joogto ah u helaan miraha. Cufnaanta cayayaanka caaga ah ee ku jira hadhuudhka hadhuudhka waa in sidoo kale la dhimo. Wixii shaandho iyo biyo ku haboon. Cuntadu waxay noqon kartaa wax yar oo qoyan, laakiin waa in la cusboonaysiiyaa ugu yaraan laba jeer maalintii. Wixii biyo ah oo ku filan oo wali ah waa in la iibsadaa biyaha macdanta ah. Fiiri biyo waxay ku jiri doonaan soodhiyam aad u badan waxayna si xun u waxyeeleeyeen kelyaha xayawaanka.
Dayuuradda bilaashka ah waa in ay noqotaa qayb ka mid ah barnaamijka maalinta si loo ilaaliyo bukaansocodka caafimaadka. Shimbiraha aan duuli karin ayaa dhakhso u xanuunsan doona, ka soo baxaan ama cudur sambab ah.
Haddii aad rabto inaad iibsato xayawaan, laakiin aadan ogeyn in xayawaanku ay yihiin xayawaan aad u socoto, waa in ay tixgeliyaan iibsashada markale. Ku qasbida calaamad u taagan inay keligeed istaagto waxay noqon kartaa dhimasho. Jarotaradu waxay ka bilaaban karaan niyadjab daran si ay u diidaan inay quudiyaan, ugu dambayntii waxay noqdaan kuwo cidlo ah oo dhinto.
Si kastaba ha noqotee, ma aha noocyada kala duwan ee xuubka loo yaqaan 'parrots', laakiin la doorbidayo cirrid isku mid ah waa in la doortaa. Dhibaato badan oo ka mid ah xayawaanku waxa u shaqeeya bini-aadanka, ma aha wax bedelaad ah. Waxaa jira fursado badan oo shaqo loogu talagalay, sababtoo ah waxay ka mid yihiin xayawaanka ugu caansan.
Barashada xirfadaha waxay u baahan tahay madaxa. Buugaagta ama internetka waxaad ka heli doontaa talooyin iyo khibrado badan oo ku saabsan fursadaha shaqo ee xannibaadaha.
Nasiib darro, noocyada noocan ahi waa mid caan ah oo lagu hayo shimbiraha guryaha. Dabcan, mulkiilayaashu waxay rabaan in xayawaanka ay noqdaan kuwo rogrogmi kara oo kalsooni leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay kicin kartaa dhibaatooyin dhaqan dabiici ah xitaa xitaa khaladaadka ayaa suurtogal ah. Kuwani waxay tusi karaan, tusaale ahaan, is-naafeynta, haddii ay tani ku riixdid baadad iyo macno ahaan waalan.
Qaar ka mid ah xakamaynta gacmaha ayaa xitaa noqon kara mid aad u dagaalamaya dadka. Digniinta waa in lagu fuliyaa gaar ahaan amazons, cockatoos iyo macaws.
Kuwa ka walaacsan daryeelka cilladda waa in ay sameeyaan naftooda iyo calaamad muujinayaan oo ay iibsadaan mid hore u yaqaanay nolosha kooxaha iyo waxaa soo kiciyay xayawaanka waalidka. Xitaa xannibaadaha noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo sabir iyo dulqaad badan.
Miyuu ku haboon yahay carruurta?
Carruurta, xayawaanku maaha kuwo ku haboon. Xitaa jootooyinka ugu jilicsan waxay sababi karaan dhaawacyo ku dhaca beertooda. Waxaa intaa dheer, caruurta qaylada ah ee qaylinaya oo nolol maalmeedkuna aad u kacsan wuxuu xayawaanka ku adkeyn karaa si joogto ah. Intaa waxaa dheer, sida runta ah daryeelka waa arrin ah oo kharash badan oo loo baahan yahay in si fiican loo arko, gaar ahaan tan iyo Sareynta aad u wanaagsan ku noolaan karaan oo waxa suurtagal ah in shimbiraha, kuwaas oo naftooda u noolaadaan. Sidaa daraadeed waa in la sii balaariyo.
Midabaynta bogagga bogagga